မနက်စာ” မစားခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများ - CeleLove
(၁) နှလုံးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရ မနက်စာမစားတဲ့ အမျိုးသားတွေက မနက်စာ စားတဲ့သူတွေထက် နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ခြေ 27% ပိုများပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မနက်စာ မစားတဲ့သူတွေက နာတာရှည် နှလုံးသွေးကြောရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ သွေးတိုး၊ လေဖြတ်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။
(၂) ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။
မနက်စာ စားကျင့်မရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက နေ့စဉ် မနက်စာ စားတဲ့သူတွေနဲ့ယှဉ်ရင် အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက မနက်စာ မစားဘဲ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ 54% ပိုများပါတယ်။
(၃) ကိုယ်အလေးချိန် တက်စေနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ မနက်စာ မစားတာရဲ့ နောက်ထပ်ဆိုးကျိုးတစ်မျိုးကတော့ ကိုယ်မှန်းထားသလောက် ကိုယ်အလေးချိန်မကျဘဲ ပိုတက်လာစေပါတယ်။
(၄) စိတ်ခံစားမှုနဲ့ အားအင်တွေအပေါ် မကောင်းတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်
မနက်စာ မစားတာက အားအင်ကို လျော့ကျစေပြီး မှတ်နိုင်စွမ်းအားကိုလည်း နည်းစေပါတယ်။
(၅) ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။
မနက်စာ မစားတဲ့အတွက် နေ့ဘက်တွေမှာ အစာပိုစားမိလာကာ အဝလွန်လာပါတယ်။ အဝလွန်တဲ့သူတွေက ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။
(၆) သိမြင်နိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေတယ်။
မနက်စာစားခြင်းက သိမြင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့အတွက် မနက်စာမစားပါက ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။
(၇) ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
တစ်ညလုံး ၁၂ နာရီလောက် အစာမရှိဘဲ နေ့တစ်နေ့ရဲ့ မနက်ခင်းမှာ စားရတဲ့ ပထမဆုံးအစာကို မစားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို လျော့ကျစေပြီး ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာ ပျောက်ချင်တယ်ဆိုရင် မနက်စာ ပုံမှန်စားပါ။
(၈) ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။
မနက်စာ မစားတဲ့ အဓိကဆိုးကျိုးများအနက် တစ်ခုကတော့ ဆံပင်ကျွတ်တာပါ။ မနက်စာဆိုတာ နေ့တစ်နေ့အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးပြီး ဆံပင်မွေးညင်းပေါက်တွေ ကြီးထွားဖို့အတွက် အားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆံပင်မကျွတ်ဘဲ တောက်ပြောင်တဲ့ဆံသားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် အသားဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ မနက်စားကို နေ့စဉ် စားသုံးပါ။
(၉) ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။
ကားတွေက လောင်စာဆီမရှိရင် အလုပ်မလုပ်သလိုဘဲ လူတွေမှာလည်း ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် လည်ပတ်ဖို့အတွက် မနက်စာစားဖို့ လိုပါတယ်။
(၁၀) အရက်နာကျတာကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။
ညဘက်မှာ အရက် အလွန်အကျွံ သောက်ထားပါက နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ မနက်စာကို စားသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် အရက်နာကျတာကို သက်သာစေပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ မနက်စာ မစားဘူးဆိုရင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို လျော့ကျစေပြီး အရက်နာကျတာကို ပိုဆိုးစေကာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရက်နာကျတာကို သက်သာစေဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ မနက်စာကို စားသုံးပါ …. ။
မနကျစာ” မစားခွငျးကွောငျ့ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ ဆိုးကြိုးမြား
(၁) နှလုံးကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။
လလေ့ာမှုတဈခုအရ မနကျစာမစားတဲ့ အမြိုးသားတှကေ မနကျစာ စားတဲ့သူတှထေကျ နှလုံးတိုကျခိုကျခံရနိုငျခွေ 27% ပိုမြားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မနကျစာ မစားတဲ့သူတှကေ နာတာရှညျ နှလုံးသှေးကွောရောဂါတှဖွေဈတဲ့ သှေးတိုး၊ လဖွေတျခွငျး စတာတှေ ဖွဈနိုငျခွေ ပိုမြားပါတယျ။
(၂) ဆီးခြိုရောဂါ ဖွဈနိုငျခွေ မြားပါတယျ။
မနကျစာ စားကငျြ့မရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတှကေ နစေ့ဉျ မနကျစာ စားတဲ့သူတှနေဲ့ယှဉျရငျ အမြိုးအစား (၂) ဆီးခြိုရောဂါ ဖွဈနိုငျခွေ ပိုမြားပါတယျ။ ပိုဆိုးတာက မနကျစာ မစားဘဲ အလုပျလုပျနတေဲ့ အမြိုးသမီးတှကေ ဆီးခြိုရောဂါ ဖွဈနိုငျခွေ 54% ပိုမြားပါတယျ။
(၃) ကိုယျအလေးခြိနျ တကျစနေိုငျပါတယျ။
(၄) စိတျခံစားမှုနဲ့ အားအငျတှအေပျေါ မကောငျးတဲ့ အကြိုးသကျရောကျစပေါတယျ
(၅) ကငျဆာဖွဈနိုငျခွေ မြားပါတယျ။
မနကျစာ မစားတဲ့အတှကျ နဘေ့ကျတှမှော အစာပိုစားမိလာကာ အဝလှနျလာပါတယျ။ အဝလှနျတဲ့သူတှကေ ကငျဆာဖွဈနိုငျခွေ မြားပါတယျ။
(၆) သိမွငျနိုငျစှမျးကို လြော့ကစြတေယျ။
မနကျစာစားခွငျးက သိမွငျနိုငျစှမျးကို မွှငျ့တငျပေးတဲ့အတှကျ မနကျစာမစားပါက ဒီလုပျငနျးစဉျကို လြော့ကစြပေါတယျ။
(၇) ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျခွငျးကို ဖွဈစပေါတယျ။
တဈညလုံး ၁၂ နာရီလောကျ အစာမရှိဘဲ နတေ့ဈနရေဲ့ မနကျခငျးမှာ စားရတဲ့ ပထမဆုံးအစာကို မစားတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ သှေးတှငျးသကွားဓာတျကို လြော့ကစြပွေီး ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျတာ ပြောကျခငျြတယျဆိုရငျ မနကျစာ ပုံမှနျစားပါ။
(၈) ဆံပငျကြှတျခွငျးကို ပိုဆိုးစပေါတယျ။
မနကျစာ မစားတဲ့ အဓိကဆိုးကြိုးမြားအနကျ တဈခုကတော့ ဆံပငျကြှတျတာပါ။ မနကျစာဆိုတာ နတေ့ဈနအေ့တှကျ မရှိမဖွဈ အရေးကွီးပွီး ဆံပငျမှေးညငျးပေါကျတှေ ကွီးထှားဖို့အတှကျ အားပေးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဆံပငျမကြှတျဘဲ တောကျပွောငျတဲ့ဆံသားတှကေို ပိုငျဆိုငျခငျြတယျဆိုရငျ အသားဓာတျကွှယျဝတဲ့ မနကျစားကို နစေ့ဉျ စားသုံးပါ။
(၉) ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျအပျေါ အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိပါတယျ။
ကားတှကေ လောငျစာဆီမရှိရငျ အလုပျမလုပျသလိုဘဲ လူတှမှောလညျး ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျ လညျပတျဖို့အတှကျ မနကျစာစားဖို့ လိုပါတယျ။
(၁၀) အရကျနာကတြာကို ပိုဆိုးစပေါတယျ။
ညဘကျမှာ အရကျ အလှနျအကြှံ သောကျထားပါက နောကျတဈနမေ့နကျမှာ အာဟာရပွညျ့ဝတဲ့ မနကျစာကို စားသုံးလိုကျမယျဆိုရငျ အရကျနာကတြာကို သကျသာစပေါတယျ။ ဒီလိုမဟုတျဘဲ မနကျစာ မစားဘူးဆိုရငျ သှေးတှငျးသကွားဓာတျကို လြော့ကစြပွေီး အရကျနာကတြာကို ပိုဆိုးစကော ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ အော့အနျခွငျးတှေ ဖွဈစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အရကျနာကတြာကို သကျသာစဖေို့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ မနကျစာကို စားသုံးပါ …. ။